(Sawirro) Haweeney guulo ka soo hoysay Ciyaarihii Olomikada oo Meydkeeda la helay | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO (Sawirro) Haweeney guulo ka soo hoysay Ciyaarihii Olomikada oo Meydkeeda la helay
(Sawirro) Haweeney guulo ka soo hoysay Ciyaarihii Olomikada oo Meydkeeda la helay
Agnes Tirop, oo heysata rikoorka adduunka, taasoo u dhalatey Kenya, ayaa laga helay meydkeeda gurigeeda, kaasoo ku yaalla magaalo dhacda galbeedka Kenya, oo la yiraahdo Iten.
Booliiska ayaa sheegay in ninkii ay u dhaxdey uu yahay qofka koowaad ee loogga shakisan yahay dilkeeda.
Laba jeer oo ay ku guuleysatey biladda Naxaasta ee Ciyaaraha fudud ee dunida, iyadoo kaalinta afraad ka gashey ciyaarihii kama danbeysta ee Olympic-kada, oo la ordayey masaafo dhan 5,000m, kuwaasoo dhamaadey laba bilood ka hor. Waxey dhawaan noqotey 25 sano jir.
Baaritaan danbi ayaa haatan lagu bilaabey dhimashada gabadhan, iyadoo booliisku ay sheegeen in ninkeedii la waayey.
Arbacaddii oo maanta ah, baarayaasha dambigani ayaa waxey tageen guriga Tirop, taasoo booliisku ay sheegeen in aabaheed waa gabadha dhimataye, lagu soo war galiyey in isna la waayey habeenimadii Talaadada.
Tom Makori, oo ah madaxa booliiska ee agagaarka ay dhibaatadu ka dhacdey, ayaa sheegay markii booliisku ay gaareen guriga, waxey ka heleen meydka Tirop oo saaran sariirta, waxaana jirey dhiig badan oo daad sanaa dhulka.
Booliiska ayaa intaa ku darey in gabadhani lagaga dhuftey mindi qoorta, iyadoo halkaasi uu kasoo gaarey, lana rumeysan in taasi tahay waxa sababey dhimashadeeda.
Previous articleSaciid Ciise: “Kenya Badda ay Somalia ku qabsatay kuma qadin, waxaana sabab u ah..
Next article(Sawirro) Nin ku hubeysnaa Qaanso & Leeb oo dad badan ku laayey dalka Norwey